IXiaomi sele ikwiimakethi zangaphandle ezingama-82 | I-Androidsis
Kuhlelo lokuqala lwe-Chinese International Expo Expo, ebibanjelwe eShanghai, Lei Jun, umseki we Xiaomi, ityhile ulwazi oluthile olunxulumene nokufuna kwenkampani ukuya kwihlabathi jikelele ngexesha leqonga lezorhwebo kunye notyalo mali.
Kumsitho, wakutyhila oko IXiaomi ngoku inobukho kwiimarike ezingama-82 phesheya.
Ukusukela kwikota yesibini ka-2018, Ishishini likaXiaomi lamanye amazwe likhule ngepesenti ye-150 kwaye lingene ngempumelelo kwiimarike zangaphandle ezingama-82. Phakathi kweemarike ezingama-82 apho inkampani ikhoyo, uphawu luye kwiintlanu eziphezulu kwiimarike ezingama-25.
U-Lei Jun wongeze wathi Injongo kaXiaomi kukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi basekuhlaleni ngamaxabiso amahle. Ifemi ikwabeka imali ukuqeqesha amaqela endawo kunye nokwenza iimveliso ekuhlaleni. Umzekelo, iipesenti ezingama-95 zeemveliso zikaXiaomi eIndonesia zenziwa kwalapha ekhaya. E-India, inkampani sele iseke iiyunithi zokuvelisa zasekhaya kwaye ikwaqalisile ukutyala imali ekuqaliseni ukuphuhlisa ishishini le-Intanethi lehlabathi.
Una vez más, UXiaomi wabetha imbangi yakhe Samsung Ukuba yeyona nto iphambili kwintengiso ye-smartphone kuthunyelwe kakhulu kwimarike yaseIndiya kwikota yesithathu yalo nyaka, ngokweNgxelo yoPhando ngeCounterpoint. Isabelo sentengiso sonke sikaXiaomi kwikota yesithathu ye-2018 yi-27%, ngelixa i-Samsung ifumene isabelo sentengiso se-23%.
E-Indonesia, uXiaomi waba luphawu lwesibini ngobukhulu okokuqala kwaye ikhokelele amacandelo eefowuni eziphantsi kwe- $ 150. Apho ine-22% yesabelo sentengiso, ngelixa uphawu olukhokelayo, iSamsung, lunesabelo sentengiso esingama-25%.
Inkampani iyaqhubeka nokwanda kwihlabathi liphela, kunye neenzuzo kwisabelo sentengiso kumazwe aliqela. Amanani okuhambisa ngenqanawa eXiaomi nawo ayakhula. Inkampani ixelwe ukuba ithumele i-9.7% yazo zonke ii-smartphones ezithunyelwe kwilizwe jikelele kwikota yesithathu yalo nyaka. Ehlabathini lonke, iXiaomi ikwindawo yesine ngokuthunyelwa kwee-smartphone ngaphezulu kwe-34.3 yezigidi zeeyunithi kwikota yesithathu ye-2018, emva nje kweSamsung, iHuawei kunye neApple.
Ngaphandle kweIndiya neIndonesia, Inkampani ikwenza inkqubela phambili kwiimarike zaseYurophu, ezinje ngeSpain, apho iqhubeka nokuba nefuthe elihle. UXiaomi usete ukungena e-UK kamva kule veki kwaye uceba ukuvula Ivenkile yakhe eLondon ngoNovemba 10.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UXiaomi ukhona kwiimarike ezingama-82 zangaphandle